Dowladda Soomaaliya oo lagu wareejiyay saanad militeri ah oo ay ku howlgali doonto (SAWIRO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Dowladda Soomaaliya oo lagu wareejiyay saanad militeri ah oo ay ku howlgali doonto (SAWIRO)
Safiirka Masar u fadhiya dalka Soomaaliya ayaa maanta wasaarada gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ku wareejiyay hub iyo gaadiid dagaal, kuwaas oo isugu jiray kuwa ay isticmaalaan ciidanka iyo gaadiidka ambalaaska.
Wasiirka gaashaandhiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya C/qaadir Sheekh Cali Diini oo saanadaasi militeri lagu wareejiyay ayaa sheegay in qalabkaasi ay isticmaali doonaan ciidamada Danab ee Soomaaliya.
Wuxuu wasiirka u mahad-celiyay dowladda dalka Masar is-garab istaaga ay is-garab taagtay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dhismaha ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya.
“Qalabkaan Danab ayaa isticmaalaya, aad baan uga mahad celinaynaa dowladda Masaarida oo weligeed ka taageeri jirtay shacbiga iyo dowladda Soomaaliya dhanka Waxbarashada, Tababarada ciidanka iyo caafimaadka”, Sidaas waxaa yiri C/qaadir Sheekh Diini oo ah wasiirka gaashaandhiga ee XF Soomaaliya
Wasiir Diini ayaa ugu dambeyntii saanada militeri iyo gaadiidkaba ku wareejiyay taliyaha ciidamada xooga dalka Soomaaliya Jeneraal Maxamed Aadan oo goobta ku sugnaa.
Taliyaha oo halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa ka mahad-celiyay deeqda Masar ay soo dhiibtay, isagoona sheegay in qalabkaan uu wax weyn u tari doonno ciidamada dalka Soomaaliya.
Dhinaca kale, saanadaan militeri ayaa la sheegayaa inay isticmaali doonaan ciidamada Danab, oo ah ciidan si gaar ah u tababaran, kuwaasi oo inta badan fuliya howlgalada qorsheysan, iyadoona xilligaan la joogo ciidamada xooga dalka Soomaaliya uu ku socdo dib u dhis iyo qalabeyn aad u balaaran.